ကမ္ဘာကျော်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှာတန်ခိုးပြကာကွယ်ပေးခဲ့သောတောင်ပုလုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကမ္ဘာကျော် ဖြစ်ရပ် – Shwe Myanmar
လေယာဉ် ပျက်ကျတော့မယ့် အချိန်မှာ တန်ခိုးပြ ကာကွယ်ပေးခဲ့သော တောင်ပုလုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကမ္ဘာကျော် ဖြစ်ရပ် ..
ဘာသာရေးနှင့်ဆက်နွယ်သော အထွေထွေ ဗဟုသုတလွန်ခဲ့တဲ့ ၃၈ နှစ်လောက်က ထူးခြားဖြစ်စဉ်တခုပါ. မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီလာမြို့ အနီးရှိ တောင်ပုလု တောရရိပ်သာတွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့သော တောင်ပုလု ဆရာတော် ဘုရားကြီးသည် တစ်ချိန်က ရဟန္တာဟု ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သည်။
ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်လာသူ တစ်ယောက်အကြောင်း အပါအဝင် စာအုပ်ပေါင်းများစွာကို ရေးခဲ့သူ စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာဦးဆန်းလွင်သည် တောင်ပုလု ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအကြောင်းပြု၍ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကာ အရှင်အာဒိစ္စရံသီ ဘွဲ့အမည်ဖြင့်ရဟန်းဝတ်ပြီး မြန်မာပြည်အနှံတရားများ
လှည့်လည်ဟောခဲ့ပါသည် ။ ပျဉ်းမနား မဟာမြိုင် ဆရာတော် ဦးဇောတိကသည်လည်း ဆရာတော်ကြီးကို အကြောင်းပြု၍ ဘာသာကူးပြောင်းကာ ရဟန်းဝတ်ပြီး စာအုပ်ပေါင်းများစွာရေး၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးကို လှည့်လည်တရားဟောခဲ့ပါသည်။ 1970 ခုနှစ်ကျော်ဝန်းကျင်လောက်က
အမေရိကန်ကို ပျံသန်းတဲ့လေယာဉ်တစ်စီးဟာ ကောင်းကင်ယံမှ ပျက်ကျလုဆဲဆဲ ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဲ လေယာဉ်မူးနှစ်ဦးဟာ လေယာဉ်ဦးခေါင်းရှေ့တည့်တည့်မှာ သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ ရဟန်းတော်တစ်ပါး ကိုမြင်လိုက်ရပြီ လေယာဉ်ပျံဟာ ရုတ်တရက်ပြန်လည်ကောင်းသွားပြီး အမေရိကန်ကို ချောမောစွာပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။
အဲ့ဒီသတင်းကို အမေရိကန်သတင်းစာမှာ ဟိုးလေး တစ်ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး မြန်မာ ရဟန်းတော်တစ်ပါးက လေယာဉ်ကိုကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းအကျယ်တစ်ဝန်း ရေးသားဂုဏ်ပြုကြတယ် ။ အဲ့ဒီ အဖြစ်အပျက်ကို အဲ့ဒီလေယာဉ်မှာပါတဲ့ခရီးသည်တွေတောင်မသိလိုက်ဘူးတဲ့ အဲ့ဒီလေယာဉ်မှာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံက သစ်ကုန်သည် ဒေါ်ခင်ဝင်းဆိုသူဟာ
အံသြပြီး အမေရိကန်ကို အဲ့ဒီနေ့က ထွက်တဲ့ လေယာဉ်ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို လှမ်းစုံစမ်းကြည့်တော့ အဲ့ဒီနေ့က ခရီးသည်တွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးပါပြီး တစ်ဦးက ဒေါ်ခင်ဝင်းဖြစ်ကာ တစ်ခြားတစ်ဦးက တောင်ပုလု ဆရာတော်ကြီးပါတဲ့ ။ ဒေါ်ခင်ဝင်းဟာ တောင်ပုလု ဆရာတော်ဘုရားကြီးပုံကို
လေယာဉ်မှုးတွေကိုပြတဲ့အခါ လေယာဉ်ဦးခေါင်းပိုင်းမှာ ရပ်ပြီး လေထဲမှာ သင်္ကန်းတလူလူနဲ့လွင့်နေတာ အဲ့ဒီ ရဟန်းတော်ပါတဲ့။ အဲ့ဒီ လေယာဉ်မှုးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် အမေရိကန်မှာ တောင်ပုလုတရားစခန်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး ခုအချိန်ထိသာသနာပြုနေကြပါတယ်။ သာသနာပြုနေကြပါတယ်။
လယောဉျ ပကျြကတြော့မယျ့ အခြိနျမှာ တနျခိုးပွ ကာကှယျပေးခဲ့သော တောငျပုလုဆရာတျောဘုရားကွီး၏ ကမ်ဘာကြျော ဖွဈရပျ ..
ဘာသာရေးနှငျ့ဆကျနှယျသော အထှထှေေ ဗဟုသုတလှနျခဲ့တဲ့ ၃၈ နှဈလောကျက ထူးခွားဖွဈစဉျတခုပါ. မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး မိတ်ထီလာမွို့ အနီးရှိ တောငျပုလု တောရရိပျသာတှငျ သီတငျးသုံးနထေိုငျခဲ့သော တောငျပုလု ဆရာတျော ဘုရားကွီးသညျ တဈခြိနျက ရဟန်တာဟု ထငျပျေါကြျောကွားခဲ့သညျ။ ရတနာသုံးပါးကို ယုံကွညျကိုးကှယျလာသူ
တဈယောကျအကွောငျး အပါအဝငျ စာအုပျပေါငျးမြားစှာကို ရေးခဲ့သူ စာရေးဆရာ ဒါရိုကျတာဦးဆနျးလှငျသညျ တောငျပုလု ဆရာတျောဘုရားကွီးကိုအကွောငျးပွု၍ ဗုဒ်ဓဘာသာသို့ ကူးပွောငျးကာ အရှငျအာဒိစ်စရံသီ ဘှဲ့အမညျဖွငျ့ရဟနျးဝတျပွီး မွနျမာပွညျအနှံတရားမြား လှညျ့လညျဟောခဲ့ပါသညျ ။ ပဉျြးမနား မဟာမွိုငျ ဆရာတျော ဦးဇောတိကသညျလညျး
ဆရာတျောကွီးကို အကွောငျးပွု၍ ဘာသာကူးပွောငျးကာ ရဟနျးဝတျပွီး စာအုပျပေါငျးမြားစှာရေး၍ ကမ်ဘာ့နိုငျငံ အသီးသီးကို လှညျ့လညျတရားဟောခဲ့ပါသညျ။ 1970 ခုနှဈကြျောဝနျးကငျြလောကျက အမရေိကနျကို ပြံသနျးတဲ့လယောဉျတဈစီးဟာ ကောငျးကငျယံမှ ပကျြကလြုဆဲဆဲ ဖွဈခဲ့တယျ ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာဘဲ လယောဉျမူးနှဈဦးဟာ
လယောဉျဦးခေါငျးရှတေ့ညျ့တညျ့မှာ သင်ျကနျးဝတျနဲ့ ရဟနျးတျောတဈပါး ကိုမွငျလိုကျရပွီ လယောဉျပြံဟာ ရုတျတရကျပွနျလညျကောငျးသှားပွီး အမရေိကနျကို ခြောမောစှာပွနျလညျရောကျရှိခဲ့ပါတယျ ။ အဲ့ဒီသတငျးကို အမရေိကနျသတငျးစာမှာ ဟိုးလေး တဈကြျောဖွဈခဲ့ပွီး မွနျမာ ရဟနျးတျောတဈပါးက လယောဉျကိုကယျတငျခဲ့ကွောငျး
အကယျြတဈဝနျး ရေးသားဂုဏျပွုကွတယျ ။ အဲ့ဒီ အဖွဈအပကျြကို အဲ့ဒီလယောဉျမှာပါတဲ့ခရီးသညျတှတေောငျမသိလိုကျဘူးတဲ့ အဲ့ဒီလယောဉျမှာပါတဲ့မွနျမာနိုငျငံက သဈကုနျသညျ ဒျေါခငျဝငျးဆိုသူဟာ အံသွပွီး အမရေိကနျကို အဲ့ဒီနကေ့ ထှကျတဲ့ လယောဉျရဲ့ ခရီးစဉျကို လှမျးစုံစမျးကွညျ့တော့ အဲ့ဒီနကေ့ ခရီးသညျတှမှော မွနျမာနိုငျငံသားနှဈဦးပါပွီး
တဈဦးက ဒျေါခငျဝငျးဖွဈကာ တဈခွားတဈဦးက တောငျပုလု ဆရာတျောကွီးပါတဲ့ ။ ဒျေါခငျဝငျးဟာ တောငျပုလု ဆရာတျောဘုရားကွီးပုံကို လယောဉျမှုးတှကေိုပွတဲ့အခါ လယောဉျဦးခေါငျးပိုငျးမှာ ရပျပွီး လထေဲမှာ သင်ျကနျးတလူလူနဲ့လှငျ့နတော အဲ့ဒီ ရဟနျးတျောပါတဲ့။ အဲ့ဒီ လယောဉျမှုးတှရေဲ့ကြေးဇူးကွောငျ့ အမရေိကနျမှာ တောငျပုလုတရားစခနျးတဈခု ဖှငျ့လှဈပေးပွီး ခုအခြိနျထိသာသနာပွုနကွေပါတယျ။ သာသနာပွုနကွေပါတယျ။